Mpanoratra: atgcab, novokarin'i Robbo
Fa X-Plane 10.00 +
Ny fiaramanidina dia manana 3D cockpit sy ny mpandeha efitra. Tafiditra amin'ny efatra liveries - Fokker Lovantsika Flight, Aviaco, Air UK sy Tất - ary ny loko fitaovana amin'ny toromarika. Izany koa ny ho PDF amin'ny checklists sy ny fetra. (Ny tena F27 solika mikoriana sy Mpanosika RPM dia samy voafidy amin'ny alalan'ny "throttle". Noho izany tsy misy misaraka RPM fanaraha-maso, ka dia tsy maintsy mampiasa F3 / F4 fanalahidy ho an'izany).
Ny Fokker F27 dia fohy ny fipetrany turboprop fiaramanidina ny 44 seza natao ary nanorina ny holandey mpanamboatra Fokker, natao mba hahomby ny DC-3. Ny sidina voalohany natao ny 24 Novambra 1955. Ny dika mitovy voalohany natolotra ho Aer Lingus tamin'ny Novambra 1958.
Remos GX avy amin'i vFlyteAir v5.1 X-Plane 10